Global Voices teny Malagasy » Global Voices Miara-miasa amin’ny Magdalene, ilay gazetiboky feminista an-tambajotran’i Indoezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jolay 2018 13:29 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Rumuat Nandika imanoela fifaliana
Voninahitra ho an'ny Global Voices ny manambara ny fiarahany miasa amin'ilay gazetiboky feminista an-tambajotra an'i Indonezia, Magdalene .
Feon'ny feminista , toy ny an'ny plioralista (pluralists) sy ny liam-pivoarana ilay gazetiboky miorina ao Jakarta efa hatramin'ny 2013. Mikendry ny handray tànana ireo voafatotra, tsy miankina amin'ny fananahany, ny fitodihany ara-politika sy ny fitiavany ara-pananahana ilay e-gazetiboky tantanan'i Devi Asmarani sy Hera Diani.
Kendren'ny Magdalena ihany koa ny ho lasa iray amin'ireo sangany amin'ny famoahana an-tambajotra mifantoka amin'ny vehivavy ao Indonezia sy ao amin'ny faritra.
”Tena faly izahay ny hiaraka hiasa amin'ny GV sy hiditra ho ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina manerantany mba hitatitra sy handinika momba ireo olana goavana amin'izao andro izao izay matetika ataon'ny haino aman-jery mahazatra antsirambina. Amin'ny alalan'ity fiaraha-miasa ity, antenainay ny hahatratra mpamaky maromaro kokoa sy hifandray amin'ny tambajotran'ireo blaogera, mpanao gazety, mpanoratra, mpikatroka ary ireo hafa manao asa mitovy amin'izany eo an-toerana,” hoy i Asmarani, Toniandahatsoratra ao amin'ny Magdalene, tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny imailaka.
Manana lahatsoratra sady amin'ny teny Anglisy no amin'ny teny Bahasa Indonezia ny Magdalene. Miresaka mikasika ireo olana tsy dia resahana matetika am-pahibemaso noho ny votoatin'izy ireny mikitika ny resaka politika ny ankamaroany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/25/123052/
 Feon'ny feminista: https://globalvoices.org/2018/04/16/magdalene-magazine-gives-a-platform-to-women-and-other-marginalized-sectors-of-indonesia/